Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo?  ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
49 Ukufundwa kweMin
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha iliso?
2 Ithetha ntoni iliso likaHorus?
3 Kuthetha ntoni ukuphupha iliso lesithathu?
4 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo omnye umntu
5 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amnyama?
6 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo avaliweyo?
7 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo alusizi?
8 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo agulayo
9 Iphupha leliso elikhulu
10 Ukuphupha ujonga emehlweni omnye umntu
11 ️‍ ️ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo akugcinayo
12 Ukuphupha ngathi uvalwe amehlo
13 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amakhulu kwaye amahle?
14 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo osulelekileyo okanye acaphukisayo
15 Intsingiselo yokuphupha komntu onamehlo angaphezulu kwamehlo amabini
16 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo amancinci
17 Phupha uphulukane namehlo
18 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omnyama, ongwevu okanye omdaka?
19 intsingiselo yokuphupha ngamehlo awelekileyo
20 Kuthetha ukuthini ukuphupha utyando lwamehlo?
21 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amakhulu kunye neenkophe?
22 ⚖ Intsingiselo yokuphupha unamehlo ngasemva?
23 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ebumnyameni
24 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo esibhakabhakeni?
25 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngeliso lesiGrike?
26 Phupha ngamehlo eBuddha
27 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo ezandleni?
28 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amdaka ngombala
29 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo akujongileyo
30 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo aluhlaza?
31 Phupha ngamehlo aluhlaza
32 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amnyama
33 ✌ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo angwevu
34 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo abomvu azele ligazi?
35 Iphupha lamehlo atyheli
36 phupha ngamehlo aqhumayo
37 ◼ Iphupha lokukrwela esweni
38 〽 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo amnyama
39 Kuthetha ntoni ukuphupha ngamehlo avulekileyo?
40 Ndiphuphe ndikhuphe amehlo
41 ✖ Ukuphupha ngamehlo a-violet
42 ▶ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo aluhlaza
43 It Kuthetha ukuthini ukuphupha amehlo ethu ethungwe?
44 ♈ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ekati
45 ♉ Ukuphupha ukuba umntu uthe ntsho kuwe
46 Ukuphupha ngamehlo ebhinqa elihle
47 ♊ Ukuphupha ngokukhukhumala nemfusa amehlo
48 ♎ Intsingiselo yokuphupha amehlo emanzini
49 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo aqumbileyo?
50 ♑ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo wosana
51 ♒ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo apeyintiweyo
52 Phupha ukuba amehlo akho asesipilini
53 phupha ngamehlo angenabafundi
54 Phupha ngamehlo avaliweyo
55 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo akhanyayo
56 Iphupha ngamehlo e-psychoanalysis
57 ♋ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ansundu
58 Iphupha lamehlo aluhlaza oqaqambileyo
59 Ukuphupha ngamehlo abomvu ngaphandle kwe-irises
60 Ithetha ukuthini into yokuba ndilimaze amehlo am
61 Ukuphupha ukuba iliso lomntu libuhlungu
62 Ukuphupha isilwanyana esinamehlo amane
63 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo ezinyaweni zakho?
64 Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abangaboniyo?
65 ❤ Intsingiselo yamehlo kunye nemibala yayo emaphupheni
66 Athini amehlo esiwaphuphayo kwaye iyintoni ingcaciso?
66.2 ❤ Ukuphupha ngokungakwazi ukuvula amehlo akho, ukungaboni:
66.3 ❤ Iphupha ngamehlo entsalela:
66.4 ❤ Ukuphupha ngamehlo akhutshiweyo okanye ahlabileyo:
66.5 Ukuphupha ngamehlo agulayo:
66.6 Iphupha ngamehlo agoso:
66.7 Phupha ngomntu onamehlo amathathu.
66.8 Iliso elinye elibonwe ephupheni:
66.9 Dream️ Iphupha leliso leglasi:
66.10 Ukuphupha iliso eliwayo:
66.11 Iphupha lokuphuma kwegazi:
66.12 Ndiphupha ngamehlo aqaqambileyo okanye amehlo aqaqambileyo:
66.13 Ukuphupha iliso elingaboniyo:
66.14 Ukuphupha ngamehlo ekati:
67 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo?
68 Ukuphupha ukuba sijongiwe
69 Ukuphupha ngamehlo angaboniyo
70 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo esikhova
71 Ukuphupha ukhutshwa, uthakathiwe, iliso elibi
72 Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekelwa liliso
72.0.1 Xa siphupha sijongiwe
72.0.2 Ukuba uzibone ungaboni okanye uvalwe amehlo ephupheni lakho
72.0.3 Ukuphupha ukuba amehlo akho makhulu kwaye mahle
72.0.4 Kodwa ukuba uwabonile amehlo akho osulelekile okanye abomvu
73 phupha ngamehlo emzimbeni
74 Ukuphupha ngokungakwazi ukuvula amehlo akho
75 Ukuphupha umntwana omdaka ngamehlo aluhlaza
76 Iphupha lamehlo entlanzi
77 ⛰ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo enyoka
77.0.1 Ukuphupha umntu okanye isilwanyana ngaphandle kwamehlo
77.0.2 Ukuba uphupha ukuba awunamehlo
78 Iphupha lomntu oneliso elinye
78.0.1 Iphupha lamehlo amakhulu kwaye amahle
78.0.2 Ukuphupha umntu omthandayo okanye iqabane lakho likujongile
78.0.3 Ukuphupha ubona umntu ongamaziyo ngamehlo alusizi
78.0.4 Ithetha ntoni Amehlo ephupheni?
79 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo?
80 Intsingiselo yombala wamehlo
81 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo enja
82 Iphupha malunga nomfazi onamehlo ahlabayo
83 Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo omlilo?
84 Ukuphupha ngamehlo ezirhubuluzi
85 ☘ phupha umntwana onamehlo aluhlaza
86 Ndiphupha ngamehlo angwevu
87 ☘ Ukuphupha ngotyando lwamehlo, ukwenza utyando lwamehlo
88 Ukuphupha umntu ngelihlo elinye
89 Ukuphupha umntu onamehlo awele
90 Iphupha lentombazana enamehlo aluhlaza
91 Phupha ngamehlo ezinyaweni zakho
92 Phupha ngamehlo amdaka
93 Iphupha lamehlo anemibala eqaqambileyo
Kuthetha ukuthini ukuphupha iliso?
Amehlo zizinto ezintsonkothileyo kwaye zixabiseke kakhulu kuluntu lwethu, njengentsingiselo abayinikwayo, ukubona. Ngaphezulu, sisetyenziselwa ukwenza izigqibo kubomi bethu bemihla ngemihla, nokuba ayithembekanga ncam. Njengoko abanye abantu besitsho, njengokuthi "Izinto ezingabonwayo yintliziyo azivakali" kunye nodumileyo "obona ubuso, ubona intliziyo", zininzi iindlela zokukhohlisa nokuphazamisa umbono. Ayisiyo ireferensi epheleleyo yokuqonda kwethu umhlaba.
Nangona kunjalo, yabona el mundo, imibala yayo nabantu bayo sisipho esingenakuphikwa. Ngesi sizathu, iintsomi ezininzi, amabali kunye namabali aneliso njengophawu lwazo oluphambili. Iliso leSauron, kwiNkosi yeeNdandatho, umzekelo, izisa isimilo esikhohlakeleyo seliso elihlaselayo nelilawulayo eligxile ekugcineni yonke into iphantsi komyalelo wayo.
️ Ithetha ntoni iliso likaHorus?
Iliso likaRa / Horus, kwinkcubeko yase-Egypt, lithandwa kakhulu kwaye libe likhubalo lokhuseleko kunye nobulumko. Inamandla amakhulu kwaye yayingumthombo wokhuthazo kwiliso likaMasonry loBonelelo, oko kukuthi, iliso loyilo olukhulu kwindalo iphela, iliso elibonayo, ukwazi konke, kodwa ngegama elahlukileyo elivela kwiLiso leSauron.
Inyathelo lokuqala ekutolikeni iphupha kukuqhelana neesimboli ezinazo kunye neentsingiselo zazo. Inyathelo lesibini kukwazi ukuba amaphupha ahlala echaphazela umntu ophuphayo, iimpawu zobuntu bakhe kunye nesimo sengqondo asithathayo kwaye kufuneka siqwalaselwe. Nje ukuba kwenziwe oku, kunokwenzeka ukuba usebenzise amaphupha njengesixhobo esibalulekileyo sokwazi ngokwakho kunye nokuziqhelanisa nobomi.
️ ️ ️ Kuthetha ntoni ukuphupha iliso lesithathu?
Omnye umzekelo ngu Iliso lesithathuInxulunyaniswa nembonakalo enomdla ngakumbi nangaphantsi kwendalo kwimbono.
Ngaphandle koko, ngubani ongazange alive ibinzana elithi "amehlo ziifestile zomphefumlo"? Kulungile yenye inkalo yamehlo. Zidlulisa ngokubanzi iimvakalelo kwaye zichaze iimvakalelo ngokwenyani. Nokuba umlomo okanye izimo zengqondo zibonisa into eyahlukileyo. Bathi amehlo lilungu lomzimba elingenako ukuhlengahlengiswa, nokuba kungenziwa utyando, kuba amehlo ajongile.
️ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo omnye umntu
Amehlo omnye umntu, ephupheni, ngumqondiso weenguqu eziluncedo ebomini bakho. Ukuba, ephupheni, wenzakalise amehlo akho, lumkela ukungcatshwa.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amnyama?
Amehlo amnyama abonwa emaphupheni avakalisa uthando oluvuthayo; Amehlo aluhlaza abonisa impumelelo yezemali; Amehlo ansundu luphawu lwamandla okukhohlisa, intuition kunye novakalelo oluphuculweyo. Amehlo amhle kakhulu sisilumkiso sokungakuxabisi ukubonakala kuphela.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo avaliweyo?
Amehlo avaliweyo ephupheni yinto yokuba ukuphefumlelwa kwakho kuya kukukhokelela kwimpumelelo. Ukuba ephupheni lakho ubone amehlo agcwele iinyembezi, sisilumkiso sokuzikhulula kukungazithembi kunye nokungazinzi, ubomi bakho buya kutshintsha. Amehlo aqhwanyaza ngokungapheliyo ephupheni abonisa ukungcatshwa komntu omthembileyo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo alusizi?
Xa, ephupheni, kuvela umntu onamehlo alusizi phambi kwakho, luphawu lokuba ubutsalane bakho buya kunyuka. Fumana utyando lwamehlo, thintela ukuchitha ngaphezulu, okanye uya kuba nengxaki yemali.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo agulayo
Ukubona umntu onamehlo agulayo ephupheni akonzakali, abanye abantu bayagqithisa ukubonakala kwabo. Ukuba, ephupheni, amehlo akho okanye omnye umntu amehlo abomvu, onwabele izimvo ezilungileyo, uya kuphumelela.
Iphupha leliso elikhulu
Ngokubanzi, ukuphupha ngamehlo amakhulu kuthetha ukuqonda kwethu umhlaba, indlela esibona ngayo izinto, kunye nokuqonda kwethu okunomdla. Kuxhomekeke kwiimpawu ezivele kuwe ephupheni lakho, intsingiselo yoku inokuba yinto elungileyo okanye embi.
Apha ngezantsi uyakufumana ulwazi oluthe kratya ngohlobo lwakho lwamaphupha ngamehlo kwaye ucacise onke amathandabuzo kunye nemibuzo malunga nalo.
Ukuphupha ujonga emehlweni omnye umntu
Unxibelelwano olomeleleyo lweemvakalelo. Ukuphupha ujonge emehlweni omnye umntu kutyhila ukuba ingaphakathi lakho kunye nelomnye umntu ophuphe ngaye zixhunyiwe ngamandla aphezulu.
Mhlawumbi bayazana kubomi bethu kwaye yiyo loo nto besiva olu tsalo luqinileyo lovelwano komnye. Bayaziqonda kwaye bayazi ukuba banokuhlala bexhomekeke kwinkxaso yomnye nomnye.
️‍ ️ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo okujongileyo
Ukuphupha ujongiwe, kodwa ungawaboni amehlo wombonisi, kuthetha ukungcatshwa okungathethekiyo okuvela kumntu omthembileyo. Intuition yakho ichanekile, kwaye unokubandezeleka kakhulu koku kungathembeki.
Ukuphupha ngathi uvalwe amehlo
Ukuphupha uvalwe amehlo ubhengeza impumelelo yeminqweno kunye neenjongo zakho. Kholelwa ukuvalwa amehlo ukuba uya kuphumelela kwiinjongo zakho kwaye uya kukhokelwa empumelelweni ngokuba uphumelele.
Ukholo ngoyena mlingane wakho mhle, yile nto izakukusa encotsheni yeyona nto iphakamileyo ukuba uyakholelwa kwaye uyayithemba. Ungathandabuzi izicwangciso zoPhezukonke kuwe, kuba zihlala zijolise ekuphuculeni kwakho isimilo kunye nengqondo. Thembela nje.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amakhulu amahle?
Ukuphupha ngamehlo amakhulu kwaye amahle sisilumkiso esivela kwindalo iphela etsala umdla wokuqonda ukuba kuphela yimbonakalo akufuneki ixatyiswe. Ubuhle bokwenyani busezintliziyweni zethu, ngoko ke musa ukuthabatheka ligobolondo elingaphandle.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo osulelekileyo okanye acaphukisayo
Lumkela ukungcatshwa okunokwenzeka. Ukuphupha ngamehlo osulelekileyo okanye owenzakeleyo kubonisa ukuba umntu othile angakuhlasela. Sonke sivile "ngabagqobhozi bamehlo," abo bangacingi kabini ngokusingcatsha ukuze sihlalisane. Hlala uqaphele kwaye uqaphele ngakumbi.
Intsingiselo yokuphupha komntu onamehlo angaphezulu kwamehlo amabini
Siyazi ukuba oku akunakwenzeka okanye kuya kuba yinto engathandekiyo, kodwa ephupheni yonke into inokwenzeka, ke ukuphupha komntu onamehlo angaphezu kwamehlo amabini kufanekisela iliso lesithathu, elisinika umbono ovela ngaphakathi, intuition , umbono wento engaphaya, ithuku kunye nendawo yokuqonda ukuze kubonwe ngamehlo angaboniyo.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo amancinci
Cinga ngeli phupha njengesikhalazo esivela kwi-subconscious yakho ekuxelela ukuba umamele intuition yakho ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nento oza kuyenza. Kukho kuwe amandla emvelo okubona abangenakukwazi abanye abantu. Jonga nzulu kuwe kwaye uthembele kwisithandathu sakho, inezinto ezininzi zokukubonisa.
Phupha uphulukane namehlo
Ukukhanyela. Ukuphupha ulahlekelwe ngamehlo kubonisa ukuba uyala ukubona inyani malunga nemeko ethile. Abo baphupha ukuphulukana namehlo abo baphuphuma ziimvakalelo zentlungu kunye nenzondo. Ngaba awucingi ukuba ufuna uncedo ukuze woyise ezi mvakalelo zangaphambili?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omnyama, ongwevu okanye omdaka?
Ukuphupha ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omnyama, ongwevu okanye omdaka ngokucacileyo kunika umbala ngamnye intsingiselo. Makhe siye kubo: amehlo aluhlaza abonisa ukuzola, uxolo lwengqondo noxolo; Amehlo aluhlaza yintengiso yempumelelo yakho yezemali, ukuchuma kunye nempumelelo kwishishini lakho; Amehlo amnyama axela uthando oluninzi oluvuthayo kubomi bakho bobulili; Amehlo angwevu abonisa ukufika kwamaxesha okuchazwa, ukuba nesizungu kunye nokubonakalisa; Amehlo amdaka aluphawu lwamandla amakhulu okulukuhla, intuition etyebileyo kunye nokukhula kovakalelo lwakho lwenyama.
Intsingiselo ye Ukuphupha ngamehlo awelekileyo
Iingxaki zokubonakala. Ukuphupha ngamehlo aweleyo kukuxelela ukuba ungonzakaliswa kukugxekwa ngabantu kunye namanqaku, kuba abonwabanga kwaye baxabisa imbonakalo kuphela. Umhla uya kuza xa abo bantu banye baya kuba nakho ukulungisa uluvo lwabo kwaye babone ubuhle obungaphaya kwegobolondo esinayo sonke.
Kuthetha ukuthini ukuphupha utyando lwamehlo?
Lawula inkcitho. Ukuphupha ngotyando lwamehlo kukucela ukuba uphephe ukuchitha ngaphezulu kwizinto ezingafunekiyo okanye unokuba nentloko enengxaki yezemali.
Utyando lwamehlo lubonisa ukuba awuboni apho imali yakho isiya khona kwaye ke isifundo siya kuba nzima kwaye sibe buhlungu, njengokuhlinzwa kwamehlo, ukubuyisela umbono ocacileyo kwiindleko zakho.
¿Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amakhulu kunye neenkophe?
Ukuphupha ngamehlo amakhulu kunye neenkophe kubonisa ulwazi, ukuqonda, ukuqonda kunye nokukhanya. Zininzi iintsingiselo kweli phupha, kodwa sinokuqinisekisa ukuba uninzi lwalo lumele indlela olibona ngayo ihlabathi elikungqongileyo.
Njengawo wonke umyalezo othunyelwa kukungazi kwakho xa ulele, kuya kufuneka unike ingqalelo iinkcukacha zephupha ukuze uliqonde ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuyitolika ngokuhambelana nomzuzu ohlangabezana nawo ngoku.
⚖ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ngasemva?
Thatha eli thuba ukujonga intsingiselo yamaphupha ngamanye amalungu omzimba:
Ukubona imibala, ubuhle kunye neziganeko zehlabathi sisipho sokwenene. Akumangalisi ke ukuba eli lungu lomntu liphambili kwiintsomi ezahlukeneyo kunye neempawu eziyimfihlakalo. Nokuba kukwiintsomi ezintsomi okanye iindinyana zembali, iliso lihlala liboniswa njengendawo yonke kwaye linamandla, lowo ubona yonke into.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ebumnyameni
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi, ukuphupha ngamehlo ebumnyameni kufanekisela ukukwazi Inyanga Ukubona ebumnyameni, ngelixa ilihlo liselukhanyisweni limela ukukhanya kweLanga. Nangona kunjalo, uluntu lwakudala lwalunika ezinye iintsingiselo emehlweni.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo esibhakabhakeni?
Umbono okuyo yonke indawo kaHorus, uThixo weLanga. Isimboli siqinisekisa ukhuseleko kunye nempilo yomntu oyinxibileyo. Kwakhona, kwaziwa ngokubonelela ngokuchuma kunye nobulumko. iliso likaThixo elijonge uluntu. Iliso loBonelelo lamkelwa njengenxalenye yesimboli ekubuyiselweni kweTywina eliKhulu laseMelika ngo-1782.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngeliso lesiGrike?
Iliso laseTurkey okanye lamaGrike likhusela umona kwaye lifunxa amandla amabi. Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kwisithethe senkolo yamaSilamsi.
Phupha ngamehlo eBuddha
Ukuphupha ngamehlo emifanekiso eqingqiweyo kaBuddha kunika umbono wokuba ukwimeko yokucamngca. Kungenxa yokuba uBuddha ubona yonke into, "kodwa akukho nto ithethayo." Iliso lesithathu, eliphakathi kwezinye ezimbini, laziwa njenge "Amehlo oBulumko."
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo ezandleni?
Kulula ukuyiqonda indlela yokubaphupha ngamehlo asezandleni zethu, eli lungu lomzimba wethu lingaguqukiyo, lithumela iimvakalelo ezingenakuchazwa ngumlomo. Ke ngoko, ukuphupha ngamehlo akho kuthwala umyalezo onamandla wotshintsho olubalulekileyo kunye nokuqonda okutsha.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo ansundu kucace
Nokuba uziveza nomntu owonwabileyo kwaye odlamkileyo, ngoncumo luhlala lubonisa, ngamehlo akho axelela umhlaba ukuba kwenzeka ntoni ngaphakathi kuwe. Kuba inkolelo edumileyo ithi amehlo ziwindow yomphefumlo.
Ukuphupha ngamehlo akho kuthetha lukhulu ngobuntu bakho nakwindlela ocinga ngayo, umphuphi. Ke ngoko, xa ulitolika, eli phupha linokuba sisixhobo esibalulekileyo sokuziqhelanisa nokuzazi ngokwakho.
Amehlo ephupheni anokuba nentsingiselo eyoyikisayo, umfanekiso onegunya. Nangona kunjalo, zifanekisela ukwazi, ulwazi kunye nobukrelekrele. Okwangoku, kuxhomekeka kwindlela abonakala ngayo ephupheni lakho, kunokuvela iintsingiselo ezahlukeneyo.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo akujongileyo
Xa uphupha ngamehlo amileyo akujongile, ukungazi nto kubangela ukuba uve intshutshiso, emele ukungazithembi kunye neentloni. Nangona kunjalo, ukuba awonwabanga phambi kwamehlo amabini, iphupha lithatha imvakalelo yokuzithemba kunye nokuzixabisa.
Nika ingqalelo ubungakanani bephupha lakho ukuze uqonde ngcono umyalezo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo aluhlaza?
Ukuphupha ngamehlo aluhlaza kuthetha ukuba umzuzu woxolo noxolo usondele. Kodwa inokubonisa imimoya elungileyo kubudlelwane bakho bothando, Oko kukuthi, ukuba ukhe wanethuba lokungavisisani neqabane lakho, lixesha lokuba uphumle kwaye wonwabele ukuzola.
Phupha ngamehlo aluhlaza
Uhlaza ngamehlo aphuphayo kufanekisela ithemba elididekileyo elisaziva ngaphakathi. Kuhlala kunzima ukugqitha kulindelo olungafezekiswanga okanye ukuphilisa inxeba elivulekileyo. Kodwa ukuze uye phambili, kuya kufuneka uqonde ukuba ukukhathazeka yinxalenye yokufunda kwakho.
Olunye utoliko lokuphupha ngamehlo aluhlaza lunentsingiselo elungileyo-umqondiso wempumelelo yezemali. Uyawazi ukuba umvuzo ubulindele ixesha elide usebenza kwakho nzima? Kuba lixesha lokuba uyamkele.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo amnyama
Ngalo naliphi na ithuba, uyathandana, uyaphupha? Ukuphupha ngamehlo amnyama kuthetha ukuba uhlala nothando oluvuthayo kunye nothando. Zilungiselele ixesha elisondeleyo kunye neencasa eziza kuza ukuvuselela ilangatye lothando.
Kodwa ukuba unqanyulwe ngakumbi, ungakhathazeki. Ukuphupha ngamehlo amnyama kukwabonisa isigaba esifanelekileyo ekufumaneni iqabane lakho lomphefumlo.
✌ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo angwevu
Abaninzi bathi intsingiselo yokuphupha ngamehlo angwevu sisiphumo sokuthandabuza nokungaqondi. Nangona kunjalo, le ntlebendwane ivela kuphela ngenxa yokuba ithuba lokuphuhliswa kwemvakalelo yokulalana linamava. Ukongeza, ukuphupha ngamehlo ansundu kukwabonisa amandla akho okulukuhla kunye neyona intuition yakho ikhathazekileyo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo abomvu ligcwele ligazi?
Kuqhelekile ukudibanisa obomvu ugcwele igazi kunye neemvakalelo ezinamandla kunye nezishukumisayo kuba sisandi esifudumeleyo, uphawu lokutsha kunye namandla. Ngale ndlela, ukuphupha ngamehlo abomvu azele ligazi kunxulunyaniswa neemvakalelo ezinje ngentshiseko nosizi.
Nangona kunjalo, eyona ntsingiselo ibalulekileyo yeli phupha ngumngcipheko wokuba nomsindo kunye nobundlobongela obuzisa kwimpilo yakho yokomoya. Kungenxa yokuba ezi mvakalelo, zomelele njengothando nothando, zinokutsala amandla amabi kunye namandla.
Iphupha lamehlo atyheli
Ngaba uziva udiniwe kwaye usindwa? Ixesha lokuqala ukuhoya impilo yakho, mphuphi. Ewe, ukuphupha ngamehlo atyheli kuthetha ukuba uthatha uxanduva oluninzi kwaye umzimba wakho awuxhasi xinzelelo lungako.
Enye inkcukacha ebalulekileyo etyhilwa leli phupha yimpilo yakho. Zibuze ukuba wagqibela nini ukuya kugqirha uyokuhlolwa. Umzimba wakho kufuneka uhambe nawe kwindlela yakho yokuzivelela. Nangona kunjalo, ukuba uyaqhubeka nokungahoyi ukusikelwa umda kwakho, awuyi kuyishiya loo ndawo.
phupha ngamehlo aqhumayo
Ukuphupha ngamehlo aqhumayo kuthetha ukuba yonke imizamo yakho iya kukhokelela empumelelweni. Uya kuba nexesha elinzima kwaye uza kuchacha. Ngamanye amagama, emva kokucwangcisa okuninzi, ukoyisa imiqobo, kunye nokungalali ebusuku xa usenza umsebenzi wakho, lixesha lokuba uvune umvuzo.
Amaphupha ngamehlo aqhumayo abonisa ukhuseleko lwamandla akho kunye neetalente, kuba unokuthembela nangaphandle kwamehlo.
◼ Iphupha lokukrwela esweni
Xa unendawo esweni lakho, umbono wakho uba mfiliba kwaye ube buhlungu. Yiyo loo nto ukuphupha intwana esweni kumela ubunzima bokubona ubunyani, mhlawumbi kungenxa yemiqobo ethintela umbono okanye ngenxa yokoyika inyani efihle isibi.
Lo myalezo uvela kokungabikho zingqondweni ubonakalisa isidingo sokuvula amehlo akho ngokubanzi, ucofa ithontsi "lethontsi lamehlo lokwenyani" ukuze ubone okungaphantsi kwempumlo. Siyazi ukuba sihlala siyityeshela imeko esoyika ukujongana nayo. Kodwa jonga kwesi sigaba njengokukrwitshwa: inxeba liya kwenzakala ngalo mzuzu, kodwa liya kuphola ngokukhawuleza.
〽 Intsingiselo yokuphupha ngamehlo amnyama
Isilumkiso: Ukuphupha ngombala omfusa okanye osulelekileyo yinto embi. Kungenxa yokuba ukungazi nto kukulumkisa ukuba ulumkele ukungcatshwa okunokwenzeka kubantu abasondeleyo kuwe abafuna ububi babo.
Ke ngoko, lumka ngakumbi nabahlobo bakho kwaye unikele ingqalelo ngakumbi kwizenzo zabo bakungqongileyo. Kodwa ungakhathazeki, sahlule amasiko ama-3 ukuthintela iliso elibi:
Kuyathakazelisa indlela iphupha elilula elinokuthi ngayo kakhulu malunga nobomi bakho, akunjalo?
✔ Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo avulekileyo?
Ukuphupha ngamehlo avulekileyo ngumqondiso wokutsha ebomini bakho. Ukwazi ukuba kulungile okanye kubi, kuya kufuneka ujonge iinkcukacha zeli phupha, njengombala kunye nemeko yamehlo.
Ndiphuphe ndikhuphe amehlo
Iphupha elo libonisa ukuba uyakudlula kwixesha apho ungazukukwazi ukubona ubunyani obukujikelezileyo, oko kukuthi, abantu okanye izinto zinjani.
Ingxaki enkulu koku kukuba uya kuba semngciphekweni wokubethwa, ukungcatshwa kunye nokugwetywa okungalunganga. Ukuthintela ezi ngxaki, zama ukujongana neemeko kunye nabantu ngakumbi, kwaye ukholelwe ngakumbi kwi-intuition yakho.
✖ Iphupha ngamehlo e-violet
Umbala we-violet unxulumene nethamsanqa kunye nobuninzi. Ukuba ucinga ngokutyala imali kwinto entsha, makube kukuthenga, ukuvula ishishini, phakathi kwabanye, eli lixesha elifanelekileyo lokwenza njalo, kuba amathuba okuphumelela makhulu.
Kwakhona, ukuba ujongene neengxaki zemali okanye ezempilo, iphupha elo libonisa ukuba ziya kusonjululwa kungekudala kwaye uza kungena kwinqanaba lokuzinza kunye nokuba sempilweni.
▶ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo aluhlaza
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uyafana nokuzola, ulwazi kunye nokulingana ngokweemvakalelo nangokomoya. Oku kuthetha ukuba ixesha lokuzola liza kuqala, lifune ulwazi lomntu kunye nolwasemoyeni, oluya kukhokelela ekukhuleni nasekukhuleni.
Musa ukumangaliswa ukuba unomdla wokuzazi ngcono kunye nokwenza nzulu ulwazi lwakho kwimicimbi enxulumene nokomoya okanye inkolo. Lo iya kuba ngumzuzu wokuzazi oya kuba nefuthe elihle kubomi bakho ngokubanzi.
♐ Kuthetha ukuthini ukuphupha amehlo akho ethungwe?
Iphupha eli kukuvusa ukungcatshwa: umntu uthi yinto engeyiyo, kwaye uyakuqhatha, uzama ukukwenzakalisa, ukuba uthathe into eyeyakho.
Khathalela wena, ubudlelwane bakho, nezinto onazo. Lumka abantu abazama ukufumana okungakumbi malunga neemvakalelo zakho kwaye xa ububele ngenxa yakho bunyanzeliswa okanye bugqithisile. Ngale ndlela, iingxaki zinokuthintelwa.
♈ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ekati
Liphupha elibonisa ubuxoki nokungathembeki komntu osondele kuwe, ongakhange ukwazi ukuxela ukuba ungumntu olungileyo okanye ombi. Ukuthintela iingxaki, lumka xa utyhila iimvakalelo kunye neengcinga zakho nakubani na, kuba olo lwazi lunokusetyenziswa ngokuchasene nawe.
♉ Ukuphupha umntu ejonge kuwe
Eli liphupha elithi uyakuseta unxibelelwano lweemvakalelo nomntu omtsha kwisangqa sabahlobo bakho okanye iqabane elitsha elithandanayo, uqala ubudlelwane obuhlala buhleli obuza kukuzisela ulonwabo olukhulu. Vulela entsha!
Ukuphupha ngamehlo ebhinqa elihle
Ndiphupha eso sisilumkiso: uthathwa kukuvela, uyithanda ngokulula. Ingozi enkulu kule nto kukuba ubeka umngcipheko wokuba lixhoba labantu abakhohlakeleyo abakulungeleyo ukukwenzakalisa.
Zama ukukhumbula ukuba inkangeleko ayisiyiyo yonke into kwaye uhlala uhlalutya izimo zengqondo zabantu, eziya kunciphisa umngcipheko wokulahlekiswa, ukudana nokwenzakala.
♊ Phupha ngamehlo ukudumba nokumfusa
Iphupha elinamehlo akhukhumeleyo nemfusa lithetha ukungcatshwa kunye nokudana nomntu osondeleyo noqhelekileyo. Xa ujongene nale meko, zama ukwenza izinto ngendlela eyiyo, nokuba usentlungwini. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba oku kungcatshwa kuya kukunceda njengamava okufunda, njengoko uya kukrokrela isimo sengqondo sokurhanela kwaye uphephe okunye ukudana.
♎ Intsingiselo yokuphupha amehlo emanzini
Iphupha elinamehlo emanzini linxulunyaniswa neemvakalelo ezibaxiweyo, ke iphupha eli lithetha ukuba uyakufumana ithuba lokungalingani ngokweemvakalelo, elinokukulimaza kubudlelwane nasemsebenzini.
Zama ukwamkela imisebenzi ekunceda ufezekise ulungelelwaniso, njengokuchitha ixesha kunye nawe, ukuzilolonga, ukonwabela ubomi ngakumbi nabahlobo, nokwenza umsebenzi owahlukileyo okunika uyolo.
♏ Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo aqumbileyo?
Eli liphupha elibonisa iingxaki ezihambelana nempilo. Nika ingqalelo imiqondiso akunikwa ngumzimba wakho kwaye ufune ugqirha ngokukhawuleza, ukwenza iimvavanyo kwaye ujonge ukuba zonke izinto zilungile na.
Olu khathalelo luyakukunceda uphephe ukugula okanye ukonyuka kokugula okukhoyo, kunye nokuqinisekisa ngobomi obungcono kunye nokuzimisela ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
♑ Intsingiselo suphupha ngamehlo wosana
Ukuphupha ngamehlo kungaphezulu kolo hlobo lwamaphupha aneentsingiselo ezahlukileyo nezahlukileyo. Yonke into iya kuhlala ixhomekeke kwiimeko zephupha.
Ukuphupha ngamehlo kunokuba yimbonakalo yeziganeko ezilungileyo kunye nokunye okungathandekiyo. Banokuqikelela malunga neenkalo ezahlukeneyo zobomi, ezinje: ngothando, umsebenzi, ubuhlobo, phakathi kwabanye.
Okwangoku, ukuphupha ngamehlo kunokubonisa imiyalezo. Banokuba zizilumkiso, ezingafanelekanga ukuba zingananzwa sithi, kuba zizilumkiso ezibalulekileyo.
Unomdla? Jonga apha ngezantsi, iiplothi kunye nemixholo yokuphupha ngamehlo kunye nokutolikwa kwazo. Kwakhona, nikela ingqalelo kwizindululo, iingcebiso kunye namacebo anokukunceda ukuba ubenokuzibeka ngcono kwimeko nganye elindelekileyo! Uya?
♒ Intsingiselo ye phupha ngamehlo aqatyiweyo
Ukuphupha sinamehlo aqatyisiweyo, kunokuthetha ukuba usondele kakhulu emntwini. Kodwa ayisiyiyo ulwalamano olusenyongweni.
Musa ukoyika okanye ube neentloni ukuthetha ngengqondo yakho nakwesiphi na isihloko kumhlobo, ilungu losapho, okanye umntu osebenza naye omthanda kakhulu. Kuqhelekile ukuba abantu balwe neengcebiso, kodwa ukuba ukhe waphupha ngalo mntu ngale ndlela, yithi ewe kuleyo ucinga kwaye uncede lowo umthandayo, akunjalo?
Phupha ukuba amehlo akho asesipilini
Ukuphupha isipili, ngakumbi ujonge ngqo emehlweni akho, luphawu lokuba kuya kufuneka unikele ingqalelo kwiinkcukacha zeli phupha! Iphupha elo lithetha ukuba ityhila indlela ekujonga ngayo.
Nokuba amehlo akho abuhlungu okanye adakumbile, yile ndlela ujonga ngayo abo bakungqongileyo. Kodwa ukuba amehlo akho abonakala ekhanyayo kwaye ehlakaniphile, yindlela abantu abakubona ngayo. Ukujonga kwakho, ubukhulu becala, kutyhila into oyiphetheyo ngaphakathi kuwe ...
phupha ngamehlo angenabafundi
Ukuba uphupha ngamehlo angenabafundi, oko kukuthi, ukuba amehlo akho uwavulile ephupheni ngumqondiso wesilumkiso! Kuya kufuneka uqaphele izilingo ezikhokelela ekubeni uchithe imali.
Njengesilumkiso esivela kwi-subconscious yakho, eli phupha lineenjongo zokukwazisa ngemingcipheko kubomi bakho bemihla ngemihla. Mhlawumbi lixesha lokuba uphinde ucinge ezo ndleko zingafunekiyo kwaye ugcine imali yento eluncedo kuwe okanye kusapho lwakho luphela?
Phupha ngamehlo avaliweyos
"Ukuphupha uvale amehlo" kubonisa ukuba uziva uzithembe kakhulu. Ukuzithemba kulungile, kodwa ukuziva ungaphezu kwemfuneko kunokuba yingozi ...
Ke ulumke ngakumbi olo hlobo lokubaxa. Inokukhokelela kwikratshi, ingozi, ukungakhathali, njl.
Kananjalo inokukwenza ukuba umile, kuba ucinga ukuba wazi yonke into. Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba sihlala sifunda izinto ezintsha kwaye kufuneka senze umzamo!
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo akhanyayo
Nali elinye lamaphupha amnandi nabani na anokuba nawo. Njengabantu abanamehlo aqaqambileyo ngokubanzi bonwabile, eli phupha lixela kwangaphambili ukuba ulonwabo luza kukhawuleza lunkqonkqoze emnyango!
Kuya kufuneka uneendaba ezimnandi kwiindawo ezininzi zobomi bakho: umsebenzi, uthando, usapho, imali. Yiba nombulelo ngobomi, kuba asisoloko sinesi sipho ebomini bethu, akunjalo?
Iphupha ngamehlo e-psychoanalysis
Ukuba uza ephupheni ngamehlo amdaka, oku kunokuba sisiphumo sokungavisisani phakathi kwabahlobo okanye usapho. Ukujongana noku, zama ukuqonda ngakumbi ukuba sahlukile kwaye ayisiyiyo le yokuba lo mntu akavumelani nawe ukuba banesimo esibi. Kwaye okubi kakhulu, musa ukuphuma uyokutya iyelenqe.
♋ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo ansundu
Ukuphupha ngamehlo ansundu nako kunentsingiselo entle! Isilumkiso kukuba kungekudala uza kuphumelela kwimicimbi enxulumene nentliziyo.
Ngamanye amagama, kungekudala uza kufumana uthando okanye usombulule ukungaboni ngasonye kwakho nomyeni wakho okanye intombi yakho. Kulungile, akunjalo?
Phupha ngamehlo aluhlaza eqaqambileyo
Amaphupha ngamehlo aluhlaza ahambelana nethemba. Eli phupha ngumyalezo ukuze unganikezeli emaphupheni okanye kwiinjongo zakho.
Qhubeka ulwela into oyinqwenelayo! Amandla, ukholo kunye nokuzithemba!
Phupha ngamehlo abomvu ngaphandle kwe-iris
Ukuphupha ngamehlo abomvu sele kuthetha ukuba into ayihambi kakuhle. Ngaphandle kokuba uphuphe ngamehlo abomvu kwizidalwa ezintle, ukuphupha ngamehlo abomvu ebantwini luphawu lokuba impilo yakho ayenzi kakuhle.
Cinga kwaye uhlalutye imikhwa yakho. Ukuba ufumanisa kufanelekile, nxibelelana nengcali. Khumbula ukuba impilo yeyona nto ixabisekileyo esinayo ebomini bethu, akunjalo?
Ithetha ukuthini into yokuba ndilimaze amehlo am
Ukuba ubenephupha elothusayo lephupha elilimaza amehlo akho, intsingiselo yelo phupha isenokuba kwintetho edumileyo. Mhlawumbi ujongwe ngokusondeleyo yi "puncher yamehlo," oko kukuthi, unomona.
Umntu osondele kakhulu usenokuba uceba into ngokuchasene nawe, umona. Kulindeleke ukuba umntu othile afune ukuba usilele ukuze uthathe indawo yakho. Isenokuba ngumnqweno wokuba ungoyena mntu umbi kakhulu.
Ngapha koko, uyabachonga aba bantu aze abaleke kwinkampani yabo.
Ukuphupha ukuba iliso lomntu libuhlungu
Khawufane ucinge iphupha apho ukhohlakele ngokugqithileyo kwaye ukhathaze amehlo omntu ... Mhlawumbi, nokuba ungaqondanga, wenzakalisa iimvakalelo zomntu kwaye loo mntu ulusizi kakhulu.
Zama ukulinganisa amagama akho kunye nezimo zengqondo, kuba unokuphulukana nabahlobo abaxabisekileyo ngenxa yokuziphatha kwakho. Umzekelo, iziqhulo ezingalunganga okanye indlela onxibelelana ngayo nezinto zizimo ezinokuthi zikhokelele kwintlungu enzulu.
Ukuba woniwe kuqala, sukuzibuyisela iziphoso okanye ugcine iimvakalelo zokuziphindezela. Kungenxa yokuba ezi ndlela zokuziphatha zinokukhokelela kumjikelo ongapheliyo kunye nokuphelisa ubudlelwane obukade bude kwaye buhlala buhleli. Cinga ...
Ukuphupha isilwanyana esinamehlo amane
Iliso eline-quadruple likhubalo lakudala kwaye ukuba uphupha ngalo ufuna ukhuseleko ngakumbi. Kunokubakho abantu abanomona okanye abakhohlisayo abakungqongileyo.
Nika ingqalelo ngakumbi kwiindlela zokuziphatha, izimo zengqondo, kunye namazwi abo bakungqongileyo. Xa uchonga abantu abakrokrelayo, zama ukuhlala kude kangangoko kunokwenzeka.
Nangona kunjalo, ayilunganga ukuphuma uyokuxoxa ngalento nabanye. Isenokungaqondwa kakuhle. Makhe umntu ngamnye abe nesigwebo sakhe kwabanye, akunjalo?
Amaphupha ayakwazi ukubamba umdla wethu kuba ngamanye amaxesha abuyela kwiingcinga zethu emini.
Eyona nkcazo inokwenzeka yeyokuba sisikhokelo, incam kunye nesilumkiso malunga nendlela esenza ngayo ubomi bethu.
Ke landela zonke iintsingiselo zamaphupha akho kwaye ubone ukuba uthini umyalezo.
❤ Ingaba ithetha ntoni uphuphe ngamehlo ezinyaweni zakho?
Njengenye yezitho zengqondo, amehlo anentsingiselo ekhethekileyo xa evela ephupheni. Zijongwa njengelungu lokukhanya kwaye zimele ukwazi. Kwiinkcubeko ezininzi nakwiinkolo ezininzi, amehlo anikwe indima ekhethekileyo ngu phupha ngazo Ezinyaweni.
Ngokubanzi, sinokuthi intsingiselo yamehlo ephupheni inxulumene ngokubanzi nembono esinayo, indlela yethu yokubona izinto, uluvo lwethu. Okwangoku, kubalulekile ukutolika iphupha ngalinye ngokwahlukileyo kuba banokufuzisela into eyahlukileyo ngokupheleleyo kwimeko nganye.
Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abangaboniyo?
Kwiinkcubeko ezininzi, "iimfama", endaweni yoko, zibonwa (xolela i-pun) njengezilumko ezinkulu, abo banamandla angaqhelekanga, kuba baneliso ekuthiwa liliso lesithathu, elinokwazi ukubona ngaphaya kweli hlabathi. Iba luhlobo lolwazi oluphezulu, ingasenakho ukubanako ukwazi malunga nokusingqonge kunye nento ebonakalayo, kuba oku kukhanyela komzimba kusivumela ukuba siziphakamise ngokuthembela kwimiqondo yethu.
Iphupha lokujonga Into ngononophelo ngamehlo ethu ithetha ukuba sinikele ingqalelo kwiinkcukacha kwaye sinikele ingqalelo kuyo yonke into esijikelezileyo. Singabantu abachanekileyo abafuna ukuqonda zonke iimeko ezincinci ukuze singalahlekelwa lulawulo. Amehlo, enyanisweni, angumqondiso wolwazi kunye nokuqonda okugqwesileyo.
Ukuphupha ujonge umntu emehlweni kungabonisa uhlobo lwethu lobudlelwane nomntu. Rhoqo sihlala sifuna ukujonga umntu emehlweni ukuze siqonde ukuba bayintoni. Ukuthetha kakhulu, emehlweni siyaziqonda izinto ezininzi. Ngokucacileyo, amehlo omntu esiphuphileyo ufuna ukusibonisa into kwaye ukungazi kwethu kuzama ukuqonda into esingayaziyo ngokucacileyo.
❤ Intsingiselo yamehlo kunye nemibala yayo emaphupheni
Ukuphupha ngamehlo (luhlaza, luhlaza, mhlophe, bomvu kunye nomnyama): Kwilizwe lamaphupha, nkqu nombala wamehlo esiwaphuphayo unokuba nentsingiselo ebaluleke kakhulu. Ngokucacileyo, kufuneka sihlalutye ngononophelo le mibala ukuze siyinike intsingiselo eyiyo: Ukuphupha ngamehlo alula (luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okanye mhlophe) luphawu lobuthixo. Imibala ekhanyayo iyafana nokucaca, okuthetha ukuba siphakamile ngokomoya. Kule meko, akunakuphepheka ukudibanisa iliso kunye nombala wokukhanya kunye nomoya wethu (ngenxa yoko inokubhekisa kubudlelwane esinabo noThixo).
Ukuphupha ngamehlo amnyama okanye ngokubanzi amnyama, njengombala omdaka okanye omdaka, inemibala efana nemibala yomhlaba kwaye eneneni ibhekisa kwilizwe elibonakalayo. Ubumnyama bunokubekwa ngokuchasene nokukhanya, kodwa hayi ngendlela engeyiyo. Amehlo "anombala omnyama" amele umbono wethu wenyani. Ke ukuphupha ngamehlo amnyama siphupha ngezinto ziyiyo, hayi ukuya "phambili", asibonisi into "yokomoya".
Umqondiso wesilumkiso? Bona amehlo abomvu ephupheni. Amehlo abomvu abonisa uthando lwomphuphi, iimvakalelo, kunye nokulungela ukulwa. Ngokucacileyo unokuzithemba okusempilweni kwaye uyazi indlela yokubeka umdla kunye neenjongo zakho. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka alumke angazibaxi amabhongo akhe, kuba kufuneka athathele ingqalelo iimfuno zabanye abantu.
Intsingiselo yamehlo amnyama ephupheni. Nabani na ophupha ngamehlo amfusa ngokucacileyo ufuna ulungelelwano ebomini babo. Umfusa ngumbala ongathathi hlangothi kwaye umele uxolelwaniso lwezichasi. Umphuphi angahlulwa phakathi kweemvakalelo ezimbini ezigabadeleyo kwaye angazi ukuba athathe isigqibo njani. Ke ngoko, amehlo amnyama abonisa ukungaqiniseki emva kokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha.
Ndikucebisa ukuba ujonge imibala yamaphupha akho ukuze ufumane okungakumbi malunga nentsingiselo yephupha lakho.
Athini amehlo esiwaphuphayo kwaye iyintoni ingcaciso?
Njengoko besesitshilo, oku kubonisa ukuba sizilumkele kangakanani izinto. Ngokukodwa, ukuba siphupha ngamehlo evulekileyo, ukungazi kwethu kusenza siqonde ukuba sizama ukuqonda into engcono kwaye singalahli iinkcukacha kunye neenkcukacha. Sifuna ukubona yonke into njengoko injalo, ngaphandle kokungaqondani.
❤ Ukuphupha ngokungakwazi ukuvula amehlo akho, ukungaboni:
Amehlo avaliwe okanye avaliwe amehlo. Iphupha lokuthi hayi ukubanakho ukuvula amehlo akho, ungabinakho ukuwavula, ubenemvakalelo yokuthungwa okanye yokuncamatheliswa, kwaye ngokwenza umzamo omkhulu wokuzama ukubona: eli phupha libonisa ukuba awunakuba nombono ocacileyo wezinto kuba abakabi nolwazi kwaye abazi. Kuya kufuneka uguqukele ekukhuleni nakwinzaliseko enkulu. Okwangoku, awungekhe wenze le nto uyifunayo. Liliphupha eliqhelekileyo labo basebancinci kwaye bengenamava, okanye mhlawumbi bengazi nto. Ezinye izilwanyana njengeekati, xa zizalwa, zivaliwe amehlo; zivula emva kwexesha elithile.
❤ Iphupha ngamehlo aseleyo:
Njengakuqala, yimeko apho umbono unzima, kwenzeka ukuze wazi ukuba uhlehlisa isigqibo, awulawuli ubomi bakho, awuzichazi kwaye uhlala kude nabantu abanetyhefu, ayiyiqondi impazamo okanye uyayamkela nje imeko. Ngaba awonwabanga. Awunakutyhola iifosholo, kuba nguwe othabatha ixesha lokuzikhulula.
Ukuphupha unebala, isanti okanye into esweni lakho-bonisa imiqobo endleleni yakho. Unokwazisa ipenchant yakho yohlalutyo olunzulu kunye nepenchant yakho yokujonga iimpazamo zabantu.
❤ Ukuphupha ngamehlo akhutshiweyo okanye ahlabileyo:
Sele sithethile ngemfama kwaye sibhekisa kwiliso lesithathu. Ukungaboni kakuhle kwiinkcubeko ezininzi kuphantse kwanconywa. Ngokubhekisele kwamehlo, nangona kunjalo, intetho yahluke kakhulu. Ukuphupha kukhutshwa amehlo ethu (okanye kwahlatyiwe) kunokuthetha ukuba umbono wethu uthathiwe kuthi ngumntu ongafuni ukuba sifunde ngezinto ezithile. Ukungaboni kakuhle kunokusishiya sididekile kwaye ngenxa yoko asinakubona ngokucacileyo, xa singenako ngenxa yomntu oko kuthetha ukuba bafuna ukusidida ngokuzithandela.
Ukuphupha ngamehlo agulayo:
ukuphupha ngamehlo agulayo kunye / okanye ukuphupha ngamehlo owonzakeleyo akunangcaciso ichanekileyo. Ukuba umbono wethu wonakele, ngokucacileyo asisenalo ithuba lokubona ngokucacileyo. Into ethintela umbono wethu isithintela ukuba singaqondi ngokupheleleyo izinto kwaye isenze buthathaka. Amehlo awonakeleyo abonisa ukungabikho kwamandla kwaye asenzi konke okusemandleni ethu ukuwabuyisela.
Iphupha ngamehlo agoso:
namehlo ajikayo okanye aqhwanyazayo aluphawu lokungaboni. Inyaniso yokungayiboni into ngokuchanekileyo ibonisa ukuba kukho into ekufuneka "siyilungisile", kufuneka sizame ukukuqonda oko sikuphatha gwenxa kwaye siyibone imeko ngokwembono eyahlukileyo.
️ Phupha ngomntu onamehlo amathathu.
Nabani na obona umntu onamehlo amathathu ephupheni mhlawumbi unentlalontle kwaye unokwenza lula abahlobo abatsha. Isimboli yamaphupha anamehlo amathathu ikwanomdla wokufuna ukwazi kunye ne-cosmopolitanism. Umphuphi ufuna ukuhlala efunda izinto kwaye afumane ulwazi olutsha olubalulekileyo kuphuhliso lomntu. Nangona kunjalo, ukuba umphuphi ubona iliso lesithathu ebunzini lomntu kwaye uziva engonwabanga, kuya kufuneka akuqonde oku njengesilumkiso: kunokubakho abantu kwindawo yakhe abafuna ukumenzakalisa.
☀️ Iliso elinye elibonwe ephupheni:
ukubona iliso elinye kuphela kuqhelekile. Iinkcubeko ezininzi zihlala zimela iliso elinye: cinga nje ngamaYiputa kunye neliso likaRa okanye izidalwa zasentsomini. Iliso limela amandla, amandla. Ngokucacileyo akufuneki sithathe kuphela lo mba weliso elinye. Emaphupheni, kunokwenzeka ukuba iliso elinye liphuphe ngezizathu ezahlukeneyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, iliso elinye linokumela umphefumlo wethu: sinokubhekisa kumbono wangaphakathi (kunye nokubhekiswa kwiliso lesithathu esithethe ngalo ngaphambili). Umbono wangaphakathi umele indlela esiyithathayo yokwazana ngcono. Ukuphupha ngeliso elinye kunokuthetha ukuba sifikelela ekuzalisekeni nasekufumaneni into esinokuyibiza ngokuba luhlobo loxolo lwangaphakathi. Kodwa lo mbono wangaphakathi ungabonakala ephupheni ukusenza siqonde ukuba kukho into engekhoyo kwaye oku kunokuba liso lesibini ngokuchanekileyo. Ukungazi kwethu kufuna ukuba siqonde ukuba kufuneka sandise umbono wethu.
☀️ Iphupha leliso leglasi:
Ukuphupha ngokuba neliso leglasi luphawu lobuthathaka. Cinga ngeglasi kunye nokuqina kwayo, kule meko iliso leglasi limela ubuthathaka bethu ngokunxulumene nombono wethu (ke ngoko, indlela yethu yokuqonda izinto). Eli liliso liba semngciphekweni wokophuka nangawuphi na umzuzu kwaye, ngokungafaniyo neliso lethu lokwenyani, ukusebenza kwalo kulinganiselwe, enyanisweni phantse kungabikho. Phucula ukutolikwa kwakho ngokubonana nekristale yamaphupha akho.
Ukuphupha iliso eliwayo:
iliso eliwayo luphawu lwelahleko, liyasikhawulela kwaye libonisa ukunqongophala kwethu kokujonga izinto. Ukuba amehlo ethu awile, oko kuthetha ukuba asihoyi ngokwaneleyo kwizinto kwaye siyazikhawulela. Ukuphupha iliso lomntu esaziyo kuwa oko kuthetha ukuba loo mntu ujongene nemeko ethile ngendlela yokungakhathali.
️ Iphupha lokuphuma kwegazi:
Ukuphupha igazi eliphuma kwiliso elinye (okanye zombini) kufuneka kuthathwe njengesilumkiso. Kufuneka sinikele ingqalelo kwinto eyenzekayo kuthi kuba sinokuba sengozini okanye oko kuthetha ukuba asikhathali nokuziphatha okuthile kwabantu abasondele kuthi (abantu abanokusenzakalisa).
☀️ Ndiphupha ngamehlo aqaqambileyo okanye amehlo aqaqambileyo:
Amehlo aqaqambileyo asephupheni lokuthanda kunye nomdlandla omkhulu. Mhlawumbi umphuphi uphinde wathandana kwaye ngoku udada "kwizulu lesixhenxe." Ukutolikwa okungathethekiyo kwephupha kubonisa ukuba umntu ophuphayo unokuziva enobukrakra kunye neemvakalelo zomsindo ezibongamela ubomi bemihla ngemihla. Ngayiphi na imeko, umphuphi kufuneka alumkele ukugcina ezi mvakalelo ziphantsi kolawulo.
Ukuphupha iliso elingaboniyo:
Njengoko besitshilo kwasekuqalekeni, umntu ongaboniyo ngumntu onikwe izakhono ezicace gca kunezabo banombono opheleleyo. Umntu ongaboniyo kufuneka athembele kwezinye izivamvo ukuze aqonde izinto angaziboniyo, kwaye ngenxa yoku uye anikele ingqalelo ngakumbi kwaye akulungiselele ngakumbi. Ngapha koko, nguye obona izinto esingaziboniyo kuba simisa kuphela ekubonakaleni kwezinto ezibonakalayo. Kodwa enye into eyahlukileyo kule ntsingiselo kukuba kungenzeka ukuba siyiqwalasele inyani, sisazi okanye singazi, kwaye siyiphinde iphile. Ukuphupha umntu ongaboniyo kubonisa ubulumko (hayi ubuthathaka, njengoko abaninzi becinga). Kwelinye icala, ukuba siyimfama, oko kuthetha ukuba sizama ukugqitha kwinkangeleko. Ukuphulukana nokubona kwakho kunokubonisa ezinye izinto ezininzi. Nangona kunjalo, kufuneka siqonde ukuba xa sizithintela ngamehlo ngokugquma amehlo okanye ukuwavala, sikwenza ngenxa yokoyika kuba asikwazi kujongana neemeko ezithile. Ngelixa umntu oyimfama engenakho ukukhetha kwaye ke kufuneka anyanzele ngenkani kubuqhetseba nakwezinye izivamvo.
Ukuphupha ngamehlo ekati:
Rhoqo, kwilizwe lamaphupha, ikati imele ubutshaba kunye nobuxoki (ngokungafaniyo nenja, ethembekileyo nenesidima). Nangona kunjalo, ezi ngcaciso zihlala zibaxekile kwaye azinyani kwaphela. Ikati sisilwanyana esinobuntununtunu obomeleleyo ngenxa yethuku laso lobufazi, ukuba ndlongondlongo kodwa kwangaxeshanye silumke kakhulu kwaye silumke, esaziyo ukuhamba nkqu nakwezona meko zinzima kwaye zingonwabisi. Ikati ineziphiwo ezintle kwaye enye yazo ngumbono: iikati zithatha izinto ekunzima kakhulu ukuba sizibone. I-feline instinct ihlala ithelekiswa nobufazi, eyomeleleyo, ezizimeleyo, ekhuselayo (yomama) kunye nethuku elinoburharha. Ukuphupha ngamehlo ekati kubonisa ukuba somelele kangakanani kwaye siqaqambisa, ngakumbi, iimpawu (esele zidwelisiwe) eziqhelekileyo kwiikati. Ukutolikwa okungcono, ndicebisa ukuba ujonge intsingiselo yeekati emaphupheni. (Funda malunga nentsingiselo yokuphupha malunga neekati)
Amehlo ngamalungu anomsebenzi ophambili wokuvumela umbono. Zikho kuzo zonke iintlobo zezilwanyana. Ubume bayo buvumela amehlo ukuba abone ukukhanya, ukuguqula umbono ube ziimpembelelo zombane, ezithunyelwa ngqo kwingqondo.
Zininzi iindidi zamehlo ezinokufumaneka kwindalo, kwaye amehlo amadoda nabasetyhini anokuqwalaselwa njengenye yezona zinto zivelile, zisebenza kunye nengqondo. Kodwa zikhona ezinye izakhiwo zamehlo ezigqibela ngokuvumela izilwanyana ezithile ukuba zibone izinto kwelinye icala.
Ngokubanzi, ukuphupha ngamehlo akho kunokuba kungonwabisi. Ngokwentsingiselo, amehlo anokugqibela ngokuthumela umyalezo onokuthi utolikwe njengononophelo olukhulu xa ufihla izinto kwabanye abantu, kuba oku kunokubangela ingozi kungekudala.
Ukuphupha ukuba sijongiwe
Xa abantu bephupha ukuba isibini yamehlo athe ntsho kubo, luphawu lokuba kukho imvakalelo yokuziva benetyala ebabambayo kwaye inokude iphele ibenze abo baphuphayo bangalali. Isenokuba lixesha lokuhlalutya iimeko ezinokubangela le mvakalelo.
Ukuphupha ngamehlo angaboniyo
Ukuba umntu uphupha engaboni, luphawu lokuba kukho uloyiko olukhulu lokukhohliswa okanye ukungcatshwa. Olu loyiko lunokuba lunomdla kuba luyanceda ukugcina isilumkiso esithile, kodwa lunokuphelisa ukumenza umntu abe yiparanoid.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo esikhova
Ukuba abantu baphupha ngokuba nesikhova okanye amehlo esikhova, luphawu lokuba kufuneka balumke kakhulu, kuba kunokwenzeka kakhulu ukuba bagule kungekudala.
Ukuphupha ukhutshwa, uthakathiwe, iliso elibi
Xa unephupha eliphazamisayo, into yokuqala ehamba ngeengqondo zabantu abaninzi kukufumanisa ukuba kuthetha ntoni. Uninzi lwexesha, sikhawuleza sicinge ukuba inokuba luphawu lwento embi enokuthi ichaphazele kungekuphela kuthi, kodwa kwanabantu abasingqongileyo. Nangona kunjalo, intsingiselo yephupha ayisoloko inento yokwenza nokubonwayo kulo.
Ngokwabafundi abaliqela besihloko, yonke into esiyibonayo ephupheni ziimpawu nje, ezimele ukuba zithetha ntoni kanye kanye. Ukwenza oku, kufuneka batolikwe ngokuchanekileyo.
Amaphupha ngamehlo anokubonakala esoyikisa kuba ngamalungu omzimba wethu anokoyikisa ngokulula umntu. Bangumqondiso wobukrelekrele, ukwazi kunye nophando lolwazi. Kodwa emaphupheni, banokuba nentsingiselo eyahlukileyo kuxhomekeke kwindlela ababonakala ngayo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekelwa liliso
Ukuphupha siphulukana neliso luphawu lokuba siyoyika ukubonisa into esingafuni kwazi mntu. Kwenzeka kakhulu nabantu abagcina iimfihlo ezininzi kwaye boyika lonke ixesha betyhilwa.
Xa siphupha sijongiwe
kodwa asiwaboni amehlo abo basijongileyo, ibonisa imvakalelo yokuziva benetyala ngento abayenzileyo okanye abangayenzanga. Mhlawumbi lixesha lokulungisa loo nto.
Ukuba uzibone ungaboni okanye uvalwe amehlo ephupheni lakho
imele uloyiko olungalawulekiyo lokuba kuya kufuneka uqhathwe okanye ungcatshwe ngumntu omkhathaleleyo. Ingabonisa ukuba uyoyika ukujongana nenyani kwaye uhlala kwifantasy eyenziwe nguwe.
Phupha ukuba amehlo akho makhulu kwaye intle
luphawu olulungileyo, ngakumbi kubomi bakho bezemali.
Kodwa ukuba uwabonile amehlo akho osulelekile okanye abomvu
Lumka kakhulu, kuba inokuba ngumqondiso wokuba uza kugula kungekudala. Zama ukukhathalela impilo yakho.
Ukuba ukhe wabona umntu onamehlo angaphezu kwamabini ephupheni lakho, oko kuthetha ukuba uya kuphumelela amadabi nxamnye neentshaba zakho kunye nabantu abafuna ububi bakho.
Ukulahleka kwamehlo kusenokungabi yinto elungileyo ukuphupha ngayo kuba ibonisa ingozi kuzo zonke iinkalo zobomi bakho.
Umbala wamehlo akho owabonileyo unefuthe elikhulu kwintsingiselo. Ukuba buluhlaza, babonisa ukuba uya kuba nethamsanqa kuthando; xa ziluhlaza zimela amathemba angayi kunika siphumo; uthuthu lunokuba luphawu lokungathembeki kwicala lomntu omthandayo okanye umhlobo osenyongweni; abamnyama babonisa uthando oluhambelanayo; ngelixa ii-browns zingabonisa ubuqili.
phupha ngamehlo emzimbeni
Amehlo emzimbeni, luphawu lwekamva elikufuphi lomphuphi. Ke ngoko, ukutolikwa ngokuchanekileyo kwephupha, iimpawu ezincinci zibalulekile: yintoni umbala wamehlo, ingxaki ethile ngamehlo, yintoni imbonakalo.
Ukuphupha ngokungakwazi ukuvula amehlo akho
Ukuphupha ngamehlo ongakwaziyo ukuwavula kuthetha ukuba ujikelezwe ngabahlobo abangathembekanga abaqala ubuqili obuninzi ngasemva kwakho, baceba ububi ngokuchasene nawe.
Ukuphupha umntwana omdaka ngamehlo aluhlaza
Amehlo aluhlaza amhlophe omntwana ephupheni, abonisa uthando olukhulu; ingwevu, iingxaki emsebenzini, isiphithiphithi kwezoshishino; Amehlo kaBrown wosana ephupheni, luphawu lobuqili bendalo kunye nokungcatsha.
Ukutolikwa okungcono, kuya kufuneka ukhumbule into oyinikwe ngumntu ephupheni: imbonakalo embi ithi kukho umngcatshi okujikelezileyo; Ukuthabatha ukujonga ephupheni kuthetha ukuvelisa inzala kumntu.
Iphupha lamehlo entlanzi
Ukuphupha ngamehlo entlanzi kuthetha luphawu lwengqondo enkulu. Kwaye ukuba ubona amehlo abomvu ephupheni, oko kuthetha ukuba kubomi bokwenene ukhathele kakhulu.
⛰ Intsingiselo yokuphupha ngamehlo enyoka
Ukuba uphupha inyoka okanye amehlo enyoka, Kuya kubakho amaxesha okonwaba kunye nolonwabo ebomini bakho. Ukuba ubona umntu amehlo akhe enezinyembezi, luphawu lokuphoxeka kunye nosizi.
Ukubandezeleka ephupheni kuthetha ukuba uyi "myopic" kwaye awuboni kwenzeka ntoni ngeenxa zonke kuwe. Ukuba yi-myopic ephupheni kuthetha ukungena engxakini.
Rhoqo iingxaki zamehlo ephupheni zibonisa ububi.
Ukuphupha umntu okanye isilwanyana ngaphandle kwamehlo
eOlu luphawu olubi, kwikamva elikufutshane unokujongana nengxaki enkulu.
Ukuba uphupha ukuba awunamehlo
oko kuthetha ukuba kubomi bokwenyani unokulindela ilahleko, okanye kukho umngcipheko wengozi kuwe.
Iphupha lomntu oneliso elinye
Kubonwa ephupheni, oko kuthetha ukuba ungalixhoba lobuqhetseba. Ukuba uphupha ngamehlo agoso, uya kuzisola ngezenzo zakho ezimbi. Amehlo agwenxa ephupheni abonisa ilahleko yezemali.
Iphupha lamehlo amakhulu kwaye amahle
eLuphawu lobutyebi, impumelelo kunye nethamsanqa. Ukuphupha umntu onamehlo kuthetha ukuphumelela uthando olukhulu.
Ukuphupha umntu omthandayo okanye iqabane lakho likujongile
Ngamehlo, oko kuthetha ukuba uyakuthanda kwaye uyabuxabisa ubudlelwane bakho. Kwaye ukuba ephupheni ubona umntu omthandayo ngamehlo avaliweyo, oko kuthetha ukuba kukho ukuphazamiseka kubudlelwane bakho.
Ukuphupha ubona umntu ongamaziyo ngamehlo alusizi
, luphawu lokuba umntu othile ufumana uvelwano olomeleleyo kuwe.
Ithetha ntoni ojos ephupheni?
Luphawu oluyimfihlakalo kwaye lunomdla, kuxhomekeke kwimeko oyibonayo, unokulitolika ngokulula iphupha lakho.
Amehlo ngokwenene ziifestile zomphefumlo, kwaye xa sijonga ngamehlo ephupheni kunokuba yindlela yokujonga ngokuthe ngqo kumphefumlo wethu, wokubona ubunzulu ngaphakathi kwesazela sethu.
Ukuphupha ngamehlo kunokutyhila okwenzekayo ngokwenene, okanye ukuba asijonganga kwicala elifanelekileyo. Kodwa Ubulungisa imfama, njengothando. Ngamanye amaxesha into esiyaziyo ingaphezulu kokuhlangana neliso.
Amehlo yenye yezona zinto zibalulekileyo ezahlula nawuphina umntu, ngenxa yoko akumangalisi ukuba amehlo ahlala edlala indima ebalulekileyo kubomi bethu bamaphupha.
Ukuphupha ukuba siyi-myopics ingabonisa ukuba kukho into ebalulekileyo esingayikhathalelanga, okanye ngekhe siqwalasele zonke iimpembelelo zexesha elide kukhetho lwethu kunye nemfuneko yokujonga umbono wexesha elide. Ukuba sinxiba iiglasi, siphulukana neiglasi, okanye sizifuna okokuqala, inokuba luphawu lokuba ingangumbono olungileyo ukujonga iziqu zethu, ekukhetheni kwethu, kwaye ubone ukuba sinalo lonke ulwazi oluchanekileyo ngaphambi kokuqhubeka . Mhlawumbi asibonanga nto bekufanele ukuba siyibonile.
Elinye lawona maphupha anomdla ngamehlo lelinye apho umphuphi ubona amehlo akhe ephupheni. Ukubona amehlo akho ephupheni, umzekelo, esipilini, okanye ngokomfuziselo, kuhlala kubonakaliswa kolwazi ngequbuliso, ukhanyiso, ukuqonda kwengqondo, ukuqonda okanye ukuqonda.
Phupha ngamehlo akho Isenokuthetha ukuba iingcinga kunye nemifanekiso ecinezelweyo kunye nemifanekiso iyaphuka ebusweni. Amehlo ahlala abonwa njengefestile emphefumlweni, ke amaphupha ngamehlo anokuhlala ebonwa njengentsingiselo yokuba iminqweno efihliweyo yomphefumlo iza ngokupheleleyo kumphezulu.
Phupha uneliso elinye, okanye ukubona iliso elinye ephupheni, kubaluleke kakhulu. Iliso lasekhohlo lihlala libonwa njengophawu lwenyanga, xa iliso lasekunene ngokukhethekileyo libonwa njengophawu lwelanga.
Abanye abantu baxele ukuba kwi samaphupha apho amehlo abo ajikele kwiintloko zabo. Olu hlobo lwamaphupha lunokufuzisela ukuqonda kokomoya kunye nokugqitha. Ukuphupha ngamehlo ngaphakathi kungabonisa umnqweno wamaphupha wokuzivavanya kunye nengqondo yakhe. Ezi ntlobo zamaphupha zihlala zihamba namaxesha obomi kubaphuphi. Olu hlobo lwamaphupha wamehlo lusenokuthetha ukuba i-subconscious yakho izama ukukuxwayisa ukuba kufuneka uyazi into ethile, okanye ukuba ufuna iimpendulo ngaphakathi kwakho. Olu hlobo lwephupha lunokuba sisilumkiso kumphuphi ukuba athembele kwimo yakhe kunye nokuqonda.
Ngakolunye uhlangothi, phupha unento esweni lakhoNjengebala, isanti, ukungcola, isinambuzane, oko kunokuthetha ukuba kukho imiqobo endleleni yakho. Amaphupha apho umntu ophuphayo enento esweni lakhe kunokuba yindlela engacacanga yokuxelela umntu ophuphayo ukuba kufuneka oyise imiqobo endleleni yakhe. Ezi ntlobo zamaphupha zinokuba yimiboniso yokuthambekela komphuphi wokuba nembono ebalulekileyo ngezenzo zabanye.
Amaphupha apho umphuphi uneliso elinye kuphela Banokufuzisela ukwala komphuphi ukwamkela okanye ukubona ezinye izimvo. Oku kunokuthetha ukuba umphuphi unengxaki yokudinwa kunye nenkani yokucinga.
Ukuphupha ukuba uneliso lesithathu Kusenokuthetha ukuba kuya kufuneka unikele ingqalelo kumbono wakho nakwimbono yakho yangaphakathi. Amaphupha malunga neliso lesithathu zihlala zilumkisa umntu ophuphayo ukuba ajonge ngaphakathi.
Amaphupha wamehlo angxwelerhekileyo okanye ukwenzakala kungabonakalisa ukwala ukujongana nenyani malunga nento obuyifihlile. Olu hlobo lwamaphupha luhlala lumalunga nokuphepha ukusondelelana, okanye ukunqanda ukujonga kwinto ekufuneka ujonge kuyo. Amaphupha ngamehlo avaliweyo okanye okonzakeleyo angabonisa intlungu okanye iimvakalelo ezibuhlungu.
Ukuphupha ngamehlo awelekileyo Kungathetha ukuba awuboni izinto ngokuchanekileyo. Amaphupha anamehlo anqamlezileyo angabonisa ukuba unokudibana.
Phupha ngamehlo ajongileyo Kungathetha ukuba ubutshaba obufihliweyo buhlola wena, ngamanye amaxesha, bonakalise. Ukuze ndi abathandi ubhengeza ubukho botshaba oluyingozi.
Ukuba ephupheni sizama fihla amehlo ngeglasi Ubumnyama obukhuselayo luphawu lokuba sifuna ukufihla okanye ukubaleka kuxanduva oluthile okanye izimo zengqondo ezinokuchasa.
Xa kumaphupha ethu sine ingxaki ngamehlo ethu, okanye siziva ngathi kukho into esikhathazayo, ibonisa ukuba asikho ngqiqweni kwezinye iimeko zobomi, kunokwenzeka ukuba ukuzingca okanye ukuzithemba kwethu kususe injongo yethu.
Ngokwesiqhelo xa sSicinga ukuba siya kugqirha wamehlo Ngenxa yeengxaki kumbono wethu, zibonakala ngamaxesha obomi bokwenyani xa siziva silusizi okanye sicinezelwe lusizi olubangelwa kukuphazamiseka ngokweemvakalelo. Eli phupha libhekisa kwimfuno yokubandakanya imeko yethu nabantu abasingqongileyo, siziva sisodwa kwaye kungoko kufuneka sifune inkxaso kunye nentuthuzelo kwabo basingqongileyo.
Ukuphupha ukuba sizama ukuvula amehlo ethu kodwa asikwazi, Ufuzisela umnqweno wethu wokubeka ecaleni okanye ukungahoyi iimeko ezimbi esijamelana nazo. Ingabonisa ukuba asizifumani izisombululo kwiingxaki okanye ukuba siyatyhala kwaye sihlale kude nazo, nto leyo imbi kakhulu kwiminqweno yethu.
Ukuba asikwazi cukuzulazula amehlo ngaphambi kwephupha, iya kuba luphawu lokuba kukho ezinye iindlela zokuziphatha zabahlobo okanye zosapho ezibangela ukuba singathembi, kwaye nangona sizama ukuzikhwebula kubo, kukho imiba yobungcali okanye yeemvakalelo ezisithintelayo ekwenzeni njalo.
Ukuphupha ngathi siphulukene namehlo yinto embi, ezinje ngosizi kunye nokudana okubangelwa yinkohliso nobuxoki. Mhlawumbi umntu esimthembayo uyasidlala.
Intsingiselo yombala wamehlo
Iphupha elinamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, ngwevu, mdaka okanye ngombala omfusa linokumela umntu onamehlo alo mbala.
Amehlo aluhlaza anokufuzisela umbono womntu ngamehlo anomona.
Amehlo aluhlaza anokubonisa ukudana, uxinzelelo, okanye uxinzelelo.
Iliso elimnyama linokumela ungquzulwano lwangaphakathi; impikiswano obukhe wanayo nomntu; okanye isithuko okanye ukwenzakala okanye ubuntu.
Ukuphupha ngamehlo abomvu kunokufuzisela "ukubona obomvu" okanye ukuba nomsindo; okanye inokufuzisela iintlungu nokulila.
Intsingiselo yokuphupha ngamehlo enja
Inja imehlo ngokwenyani ziifestile emphefumlweni, kwaye ngamehlo unokuziva uphelelwe lithemba, uvuyo, kunye nembonakalo yeemvakalelo ezahlukeneyo. Kungenxa yoko le nto ukujonga ukuba isilwanyana sakho esikunika iphupha sisalathiso esihle.
Amaphupha ngamehlo aqhelekile, njengoko sibona amehlo kwaye sijonga kwabanye abantu yonke imihla, kodwa njengayo yonke enye into, amehlo emaphupheni anokuba neentsingiselo ezahlukeneyo zokomfuziselo.
Iphupha malunga nomfazi onamehlo ahlabayo
Ukuba uphuphe umfazi onamehlo ahlabayo kwaye ujonge ngamehlo, eli phupha limela ithamsanqa kuwe.
Nantoni na eqala kwiintsuku okanye kwiinyanga ezimbalwa ezizayo iya kujika ibe yintlekele, ke kungcono ushiye okwethutyana.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamehlo ngomlilo?
Ukuba umntu ephupheni lakho unamehlo amnyama, elo phupha limele ingxaki kubomi bakho bothando. Iqabane lakho linokuphola kuwe kwaye liqale ukunqanda ngaphandle kwesizathu.
Unokulwa neqabane lakho ngezinto ebezikukhathaza ixesha elithile, kodwa awuzange uxoxe ngazo ngokupheleleyo.
Jonga amagama akho kwaye musa ukuzikhusela de ufumanise ukuba kuqhubeka ntoni. Kungelo xesha kuphela oya kuthi ukwazi indlela yokuziphatha kunye nento ekufuneka uyenze.
Ukuphupha ngamehlo ezirhubuluzi
Amehlo e-reptilian ephupheni amele inkohliso. Umntu ongamaziyo okanye ongamazi kakuhle angazama ukwenza ukuba wenze into eza kubulala kuwe.
Kuphephe ukusondela kakhulu kubantu ongabaziyo kwaye ungabavumeli ukuba baninzi kakhulu kubomi bakho. Ngale ndlela, unokuzikhusela kubo nakweyiphi na into abanokuyenza ngokuchasene nawe.
☘ phupha umntwana onamehlo aluhlaza
Ukuba uphuphe umntwana onamehlo aluhlaza, uya kuba nengxaki ethile emsebenzini wakho okanye emsebenzini. Le ngxaki iya kubangelwa yimpazamo yakho kwaye akukho mntu wumbi unokubekwa ityala ngayo.
Ngaphambi kokuba uyilahle yonke, mhlawumbi kuya kufuneka uzame enye indlela. Nangona ezi ngxaki zisenzeka, oko akuthethi ukuba azinyibiliki.
Ndiphupha ngamehlo angwevu
Ukuba amehlo ephupheni lakho ebengwevu, ungonwabela. Lumka ujikeleze abantu abakungqongileyo kwaye ungathembi mntu omtsha odibana naye. Lo mntu unokuba uphume engqondweni yakho kwaye afumane ulwazi olunokuthi kamva lusetyenziswe ngokuchasene nawe.
Hlala kude neemeko ezinzima, kuba ukuba kukho into engabonakali ilungile, ngekhe ibe njalo.
☘ Ukuphupha ngokuhlinzwa kwamehlo, usebenze ngokubona kwakho
Utyando lwamehlo, utyando lwamehlo ephupheni lakho nako kukuzisela amashwa. Izinto ngokuqinisekileyo ziya kuwa ngaphandle okwethutyana kwaye awuyi kuba nakho ukugcina ibhalansi elungileyo ebomini bakho. Ubomi bakho buya kujikwa butshintshe kwaye awuzokwazi ukubeka onke amaqhekeza.
Phambi kokuba uyeke kwaye uncame, zama ukufumana isisombululo ekuhambeni kwakho kwamashwa okanye uhlale nje okwexeshana de kudlule eli xesha lobomi bakho.
Ukuphupha umntu ngelihlo elinye
Ukuba uphupha ngendoda eneliso elinye kuphela, uya kujongana namaxesha anzima ebomini bakho aya kukhokelela ekuphoxekeni okuninzi.
Eli xesha lobomi bakho akufuneki libi kakhulu ukuba ulisebenzisa ngendlela eyiyo. Zama ukufunda kangangoko unako kwaye ungachithi ixesha ukhalaza ngokholo lwakho.
Ukuphupha umntu onamehlo awele
Ukubona umntu ejonge kwelinye iphupha lakho luphawu lwethamsanqa. Eli lixesha elifanelekileyo ebomini bakho lokuba uthathe inyathelo kwaye wenze izinto ozithandayo, kuba yonke into oyiqalayo iya kuba nesiphelo esihle.
Qiniseka ukuba uzigqibile zonke iiprojekthi zakho ezindala kwaye ungaqala ukusebenza kwezintsha, ngelixa eli xesha linethamsanqa lihlala kunjalo
Eli phupha likwazisa amathamsanqa kubomi bakho. Ukuba awukadibani nalo mntu ubalulekileyo okwangoku, eli xesha liza kusebenza ngakumbi xa kufikwa kumba wokuthandana.
Phakathi kwabo bonke abantu abakhulu oza kudibana nabo, kuya kubakho umntu olungele wena. Ke sukuchitha ixesha lakho kwaye uqalise ukuphanda.
Iphupha lentombazana enamehlo aluhlaza
Ukuba ephupheni lakho ubone intombazana enamehlo amahle kakhulu aluhlaza owakhe wabona, uya kudana kumntu osondeleyo kuwe. Loo mntu, onokuba liqabane lakho, isalamane okanye umntu osondeleyo kuwe, uya kukungcatsha kwaye akwenze uzive umbi.
Nokuba lo mntu uza kukwenzakalisa, basayinxalenye enkulu yobomi bakho, ke musa ukungxama ukubasusa ebomini bakho. Zama ukufumana indawo esivumelana ngayo kwaye uphephe ukuba novakalelo kakhulu, nokuba akukho lula.
Phupha ngamehlo ezinyaweni zakho
Ukuphupha ngamehlo kwiinyawo zakho luphawu lobutyebi kunye nokuchuma. Izinto ziya kuhamba ngokwesicwangciso xa kuziwa kwezemali kwaye uya konwaba kakhulu ngayo.
Lixesha elilungileyo lokuqalisa ukutyala imali kwiiprojekthi ezintsha. Yonke ipenny oyifakileyo iya kuhlawulwa kwakhona amaxesha amaninzi, qiniseka ukuba uziphanda kakuhle iinketho zakho zotyalo-mali.
Phupha ngamehlo amdaka
Ukuba uphuphe unamehlo angcolileyo, uya kuba nenxaxheba kwisihlwele sabantu esiza kuzonakalisa zonke izicwangciso zakho kwaye sikuthathe kude noxanduva lwakho. Phambi kokuba uye emntwini, qiniseka ukuba ujonga indlela abaphila ngayo kunye nemikhwa yabo yemihla ngemihla.
Ukuba aba bantu bamosha nje ixesha nemali yabo kwizinto ezingenamveliso, kuya kufuneka uhlale kude nabo. Ukuba ukhetha ukuhlala usondele kubo, kunokukhokelela ematyaleni okanye kungayitshintsha ngokupheleleyo indlela yakho yokuphila kwaye uzilibale ukuba ungubani kanye kanye.
Phupha ngamehlo aqaqambileyo yemibala
Amehlo aqaqambileyo mahle kubomi bokwenyani kwaye abelana ngolu phawu luhle ephupheni. Amehlo amenyezelayo ayimbonakaliso yengelosi ekhuselekileyo onayo ebomini bakho. Lo mntu ungumcebisi wakho kunye nomcebisi wakho kuyo yonke ingqiqo yelizwi, kwaye uyayixabisa ngokwenene lo mntu.
Ukuba awunaye loo mntu ebomini bakho, eli phupha linokuba luphawu lokuba uza kudibana nomntu oza kuba yile nto kanye kuwe.